स्पेनिश लेखकहरु: स्पेन को महिला कलम को उदाहरण | वर्तमान साहित्य
धेरै पटक हामी स्पेनी लेखकलाई भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय लेखकहरूलाई बढी मान्यता दिन्छौं, र त्यो हामीलाई सबै कोटीहरूमा हुन्छ। यो केवल जब एक स्पेनिश व्यक्ति देश बाहिर पहिचान गर्न थाल्छ कि हामी उनीहरुलाई बढी ध्यान दिन्छौं।
आज हामीले एक अर्कालाई माया गरेका छौं ती सबै महान स्पेनिश लेखकहरूमा ध्यान दिनुहोस्, पहिले बाट, अब देखि, भविष्यबाट, जुन तपाईलाई आफ्नो दृष्यमा हुनुपर्दछ, समर्थन र सबै भन्दा माथि उहाँको कार्यहरु थाहा छ। के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ हामी को बारे को कुरा गर्दैछौं?
1 तपाईलाई थाहा पाउनु पर्ने महान स्पेनिश लेखकहरू
1.1 अल्मुडेना ग्रान्ड्स
1.2 मारिया डाउडेस
1.3 डोलोरेस रेन्डोन्डो
1.4 माटिल्डे एसेन्सी
1.5 रोजालिया डे क्यास्ट्रो
1.7 कारमेन डे बुर्गोस
1.8 स्पेनिश लेखकहरू: ग्लोरिया फुएर्तेस
1.9 कार्मेन लारफर्ट
1.10 स्पेनिश लेखकहरू: Ana María Matute
1.11 स्पेनिश लेखक: एस्पिडो फ्रेरे
1.12 एल्वीरा प्यारा
1.13 स्पेनिश लेखक: ईवा गार्सिया सेन्ज दि उर्तुरी
तपाईलाई थाहा पाउनु पर्ने महान स्पेनिश लेखकहरू
हामी तपाईंलाई पहिले नै चेतावनी दिन्छौं कि हामी सूचीमा हुन योग्यका सबै स्पेनिश लेखकहरूको नाम लिन सक्दैनौं, किनकि हामी कहिले पनि अन्त्य हुनेछैनौं, र हामी तपाईंलाई यति धेरै जानकारीका साथ संतुष्ट पनि गर्नेछौं। तर हामीसँग एउटा विस्तृत कुरा बताउन हामीसँग पर्याप्त अंतर छ लेखकहरूको राम्रो चयन जुन तपाइँले देख्नु हुँदैन।
अल्मुडेना ग्रान्ड्स हाल एक सफल लेखक हुन् र यो कुनै अचम्मको कुरा होइन। उनका रचनाहरू समकालीन उपन्यासमा केन्द्रित छन्, तर सत्य यो हो कि उसले केही विधामा छुआयो जुन सामान्य छैन, जस्तै इरोटिक जस्ता युलुहरूसँग। उनको अन्तिम कार्यहरू मध्ये एक बिरामीहरूको चिकित्सक गार्सिया हो।
लगभग उनका सबै कार्यहरू इतिहासको अवधिमा केन्द्रित छन्। र यो त्यो छ कि भूगोल र इतिहास अध्ययन गरे (उनको आमाले बाध्य पार्‍यो, हो)।
उनी पत्रकारिता स्तम्भहरूमा पनि भाग लिन्छन्, जस्तै एल पाजमा, वा रेडियोमा, क्याडेना सेरमा।
स्पेनी लेखकहरू मध्ये अर्को जुन तपाईंले दिमागमा राख्नुपर्दछ मारिया डाउडास हो। नाम तपाइँलाई परिचित हुन सक्दैन, तर निश्चय पनि यदि हामीले "सिमहरू बीचको समय" भन्यौं भने, चीजहरू परिवर्तन हुन्छन्, हैन? विशेष गरी सिरिजमा अनुकूलनको लागि।
राम्रो मारिया ड्युडेस यसका लेखक हुन् र उनी राष्ट्रिय मात्र होइन तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि सबैभन्दा प्रशंसनीय हुन्।
अहिलेको लागि, उनका भर्खरका पुस्तकहरू मध्ये एक "कप्तानको पुत्री" हो, तर पक्कै पनि अरु धेरै मानिसहरु आइपुग्नेछन् (यद्यपि अहिले उनीहरुको एक उपन्यास, ला टेम्लान्जाको नयाँ रूपान्तरण चलिरहेको छ।
यदि तपाईं नेटफ्लिक्स जानुहुन्छ र बाज्टन त्रिकोण खोज्नुहुन्छ भने, तपाईंले तीन फिल्म पाउनुहुनेछ जुन धेरै सफल थियो। खैर, ती फिल्महरू डोलोरेस रेन्डोन्डोले लेखेका त्रयीमा आधारित छन्। यो स्पेनिश लेखक पनि हो एक ग्रह पुरस्कार को विजेता (२०१ 2016 को एक) जहाँ उनी यी सबैका साथ प्रस्तुत भएकी थिइन म तपाईंलाई छद्म नाममा लुकाउनेछु (ताकि कोही पनि थाहा नपाओन् कि उनी उनी हुन्)।
उनी सँधै लेखक बन्न चाहन्थिन् (१ 14 वर्षको उमेरमा), यद्यपि वास्तवमा उनले पछि आफूलाई ग्यास्ट्रोनमीमा समर्पित गरिन्। केही समय लाग्यो जब उनी फर्किए "आफ्ना सपनाहरु"।
तपाइँ उसलाई नामबाट धेरै चिन्नुहुन्न होला, तर तपाइँ उसलाई उनको किताबहरुबाट चिन्नुहुन्छ, विशेष गरी "एल tiल्टिमो क्याटन" भन्ने पुस्तकले, जुन ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सफलता रहेको थियो। यद्यपि यो ठूलो सफलताको बावजुद, वास्तविक (र सब भन्दा ठूलो मान्यता) "हराएको उत्पत्ति" संग थियो।
पछि उसले "द रिटर्न अफ द क्याटन" जस्ता पुस्तकहरू लेख्न जारी राख्यो, जहाँ उनी अघिल्लोले दिएको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति बचाउन फर्किए। वर्तमानमा अन्य मिडियामा पनि भाग लिन्छ, विशेष गरी पत्रकारिता।
रोजालिया डे क्यास्ट्रो
रोसालिस एक महान स्पेनिश लेखक थिए जुन हामीले हाम्रो देशमा पाएका थियौं। उहाँ १1837 देखि १1885 सम्म बस्नुभयो र एक थियो ग्यालिश कवि जो आज पनि सम्झन्छन्। उनी अरू पुरुष कविहरू (जसलाई बढी प्रख्यात गरिएको छ) को रूपमा परिचित छैन, तर उनीसँग ईर्ष्या गर्ने केही पनि छैन।
हामी उनको बारेमा के सिफारिस गर्न सक्छौं? ठीक छ, गैलिशियन गीत वा फोलस नोभास।
साथै १ th औं शताब्दी (१ 1851 XNUMX१) बाट यस लेखक, पारडो बाजनका काउन्टेस, उनी एक पत्रकार, उपन्यासकार, नारीवादी, कवि, अनुवादक, प्राध्यापक, र अरू धेरै थिए। उनी रोयल स्पेनिश एकेडेमीमा प्रवेश गर्न सक्षम भएकी महिला मध्ये एक थिइनन्।
उहाँ १ 1921 २१ मा मरे र हामीलाई लस पाजोस डे उलोआ जस्ता ठूला कामहरू छोडनुभयो।
कारमेन डे बुर्गोस
कारमेन डे बुर्गोस अलमेरियामा जन्मेकी थिइन् (विशेष गरी रोडाक्विलायरमा) र जब उनी आफ्नो पतिबाट विदा लिएर उनी म्याड्रिडमा बस्छिन्। त्यहाँ उनी एक पत्रकार र लेखक थिइन्। यद्यपि उनले केही लेख वा पुस्तकहरूमा छद्म नाम (कोलम्बिन) प्रयोग गर्नुपर्‍यो, सत्य त्यो हो उनी ठूला महिलाहरू मध्ये एक थिइन जसले सानालाई भाँचि दिए।
यस लेखकका धेरै रचनाहरू छन्, जस्तै "The रमणीय महिला", "जाकाको असुरक्षित", "महिला हुनुको कला (सौन्दर्य र पूर्णता)", "युद्धको अन्त्य" ...
स्पेनिश लेखकहरू: ग्लोरिया फुएर्तेस
ग्लोरिया फुर्तेस एक विशेष ज्ञात स्पेनिश लेखक हो, विशेष गरी बच्चाहरूको विधामा। यो पनि सम्भव छ कि तपाईको बच्चाहरुको कोठामा ती पनी एक کتاب अहिले नै छ (यदि तपाई संग तिनीहरुसंग छ भने, यदि तपाईले आफ्नो बाल्यकाल देखि नै राख्नुहुन्छ भने निश्चित हुनुहुन्न)।
तपाईंले यो लेखकबाट थाहा पाउनु पर्दछ कि उहाँ आत्म-सिकाइएको थियो र दुबै बाल साहित्य लेख्नुभयो, जसको लागि उहाँ सबैभन्दा प्रसिद्ध छ, साथ साथै वयस्क साहित्य (त्यो केहिलाई बढी अज्ञात छ)। थप रूपमा, उनले थियेटर लेखन वा पत्रिकाहरूको लागि लेखनमा पहिलो चरणहरू बनाए।
यो लेखक धेरै आक्रामक थियो। र यो त्यो हो, २ At का उमेरमा उनले नडाल उपन्यास पुरस्कार पाइसकेका थिए। उनी अरू लेखकहरू जत्तिकै लेख्दिनन्, तर त्यहाँ केहि रचनाहरू छन् जुन तपाईंले ध्यानमा राख्नुपर्दछ, त्यो पुरस्कार-विजेताको अतिरिक्त, केही पनि थिएन।
स्पेनिश लेखकहरू: Ana María Matute
सर्वश्रेष्ठ उत्तरपश्चात उपन्यासकार भनेर चिनिने यस लेखकले हामीलाई बिर्सिएका किंग गुडा वा पहिलो मेमोरी, दुई अति महत्त्वपूर्ण कामहरू भन्ने उपाधि दिए। थियो रोयल एकेडेमी अफ लेटर्सको सदस्य र धेरै पुरस्कार जीते
दुःखको कुरा, उहाँ २०१ 2014 मा बित्नुभयो।
स्पेनिश लेखक: एस्पिडो फ्रेरे
यो लेखक भएको रेकर्ड हो सबैभन्दा कान्छो लेखक एक ग्रह पुरस्कार जीत्न (२ years वर्ष पुरानो)। त्यो उपन्यास फ्रोजन पिच थियो र यो उनका उत्कृष्ट कार्यहरू मध्ये एक हो, यद्यपि धेरै पछि आए।
एल्भिरा लिन्डो द्वारा, तपाईले पढ्नु भएको पुस्तकहरू मध्ये एक मानोलिटो गफोटसको हो, हो? यस लेखकले सबै गरेका छन्, बच्चाहरू र युवा साहित्यहरू मात्र होईन, तर पनि टेलिभिजन र फिल्म स्क्रिप्ट। उहाँ हाल एल् पासेसमा सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ।
स्पेनिश लेखक: ईवा गार्सिया सेन्ज दि उर्तुरी
उनी एक स्पेनिश लेखक हुन् जसले अझ बढी कुराकानी गरिरहेकी छन्, विशेष गरी सेतो शहरको त्रिकोण पछि, तीनवटा द्रुत-पुस्तक पुस्तकहरू जुन तपाईंले याद गर्न सक्नुहुन्न (तिनीहरू पनि यस लेखकको सुरूवात थिए)।
कि हामीले यो जोड्न पर्छ कि यो छ एक्वाटाइनको साथ ग्रह २०२० पुरस्कार विजेता।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » स्पेनिश लेखकहरू
बेनिटो ओल्मो। बिग रेडका लेखकसँग अन्तर्वार्ता
रिंग श्रृंखलाको प्रभु